सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले चोलेन्द्रलाई हिजोको गुन तिरिरहेका छन् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
२३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १३:३९
काठमाडौं।अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको जड प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन्। त्यही भएर पनि उहाँले राजीनामा दिएर यो समस्यालाई निकास दिन सहजीकरण गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गरेको, सेटिङ मिलाएको, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकोलगायत उहाँमाथि ८–९ वटा आरोपहरू छन्।
मिडियाले गर्दा नेपाली जनता चनाखो भइसकेका छन्, प्रधानन्यायाधीशले गरेका कर्तुत उनीहरूले बुझिसकेका छन्। कुनै पनि व्यक्ति जति ठूलो पदमा छ, ऊ त्यति नै संविधानप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ। हामीकहाँ फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ? भन्ने उखान छ। प्रधानन्यायाधीशले यो कुरा आत्मसात गरेको देखिँदैन। यतिका विरोध भइसकेपछि उनी त्यो जवाफदेही पदमा यसरी लाज नमानी बसिरहन सुहाउँदैन।
यतिको चर्को विरोध हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश खै के हेरेर बसेका हुन्? यो त उनको पदअनुसारको आचरण नै भएन। यो त प्रधानन्यायाधीशले पियन, खरिदारको जस्तो बुद्घि लगाएको देखियो।
धेरैका मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ– चोलेन्द्र प्रकरणमा किन दलका नेताहरू चुपचाप बसे? यसो हेर्दा दलका नेताहरूको मौनताको कारण एकदम सरल छ। दलहरूका नेताहरू स्वार्थी छन्, उनीहरू लोभी–लालची छन्, उनीहरुलाई आफ्नो पद र सत्तासँग मात्र मतलव छ। देश र जनतासँग मतलव छैन। तपाईंले देख्नुभएको होला, संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि सत्तापक्ष र विपक्षीको कुनै कुरा मिल्दैन। उनीहरूको आफ्नै विचारधारा र एजेन्डा हुन्छन्।
यहाँ त आश्चर्य छ–चोलेन्द्रको विषयमा सरकार र विपक्षी दुवैको व्यापक कुरा मिलेको छ। चोलेन्द्र दुवै पक्षलाई नभइ नहुने भएको छ। अरु विषयमा सरकारले गरेको निर्णयबारे प्रतिपक्षले आफ्नो विचार दिन्छ नि! तर, यो प्रकरणमा त त्यस्तो पनि देखिएन।
यहाँ त यस्तो बिन्दु भेटियो कि सार्वभौमसत्ता अनि विदेश नीतिमा सबै दलहरूको कुरा मिलेजस्तै चोलेन्द्रको विषयमा पनि कुरा मिलेको छ। हिजोका दिनमा दलहरूले चोलेन्द्रलाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेकाले आज उनलाई गुन तिरिरहेका छन् भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ। यसरी न्यायालय दलको चंगुलमा नराम्ररी फसिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी जनताले न्यायालयबाट सुखद परिणामको आस गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा कसरी जीवित रहन सक्छ र?
न्यायालयमा आफ्नो मान्छे भर्ती गर्न उनीहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा नै भयो। धेरै अगाडि जानु पर्दैन, प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकाल सम्झिनुस् न! उनले बिगारेपछि अर्कोले सपार्ला भनेको त झन् न्यायालय ध्वस्त भयोे। त्यसपछि नियुक्त भएका न्यायाधीशले पनि न्यायालय झन् बिगार्दै गए।
( सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग न्युज कारखानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)
# बलराम केसी
प्रकाशित : २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १३:३९